As of Wed, 08 Apr, 2020 13:25
अब कुनै पनि क्षेत्रमा सिण्डिकेट रहँदैन : मन्त्री यादव
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले आफ्नो मन्त्रालय माताहातका निकायमा रहेका सबैखाले सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । बुधबार रिपोटर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षत्कारमा मन्त्री यादवले वर्तमान सरकार सिण्डिकेट तोड्ने अभियानमा सफल भएको बताएका हुन् ।
एमाले–माओवादी दूरी बढेकै हो ?
एकता प्रक्रियामा रहेका नेकपा एमाले र नेकपा एमालेबीच पछिल्लो समय सम्बन्ध चिसिएको टिप्पणी भइरहेको छ । माओवादी मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेटबारे छलफल नगरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । यस्तै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्ना बारेमा संचार माध्यममा भ्रम फैलाउने काम भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
एउटै चौरमा दुईवटा मञ्च बनाइएपछि रोकियो कार्यक्रम
नेपाली कांग्रेसले वीपी संग्रहालय सुन्दरीजललाई महत्वका साथ लिने गर्छ । जहाँ कांग्रेसका संस्थापक वीपी कोइरालाले लामो समय जेल जीवन मात्र बिताएनन् अधिकांश पुस्तक समेत उनले सुन्दरीजल जेलमै लेखे । सोही जेल अहिले सुन्दरीजल संग्राहलयका रूपमा छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता प्रयास भइरहेका बेला माओवादी केन्द्रका नेताहरुले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
दुई दिनको भ्रमणमा दुई भिन्न भूगोलमा दुई अभिनन्दन किन ?
नेपाली कांग्रेसले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न भ्रमणका क्रममा हुने तय भएको ‘नागरिक अभिनन्दन’को विषयलाई लिएर सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्ने बताएको छ ।
जिल्लामा कर्मचारी अभाव हुँदा एउटा सचिवले ३ वटा वडा हेर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । राजपुर गाउँपालिकाका वडा नंं १, २ र ३ को काम एउटै सचिव मेघसिंह पछाईले हेर्दै आएका छन् । साविक बेला गाविसअन्तर्गत रहेका तीन वडाको सम्पूर्ण काम आपूmले विगत असार महिनादेखि हेर्दै आएको सचिव पछाईले बताए ।
स्वदेश फर्काइदिन शरणार्थी नेता रिजालको माग
भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले आफ्नो बाँच्न पाउने हक गुमेको भन्दै स्वदेश फिर्ता हुने वातावरण मिलाई दिन नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् । आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेता रिजालले यस्तो बताएका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नाममा लेखेको पत्रसमेत वाचन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश र पार्टीको हितविपरीत नजान सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा आइतबार बसेको नेकपा (एमाले) संसदीय दलको बैठकमा उनले जनताको सर्वोच्च निकाय स्थानमा रहेका जनप्रतिनिधिले उत्तेजनामा नआइकन संयमित भएर पार्टीको हितमा काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन सुरु
संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को दोस्रो अधिवेशन आइतबारदेखि सुरु भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गरेअनुरूप आइतबार अपराह्न ४ बजे संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा दुवै सभाको बैठक छुट्टाछुट्टै बसेको थियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नेपालको संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिबाट बोलाइएको संघीय संसद्को बजेट अधिवेशनका क्रममा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसमेत प्रस्तुत हुनेछ ।
भ्रष्टाचार, सिन्डिकेट र कालाबजारी मुक्त देश बनाउँछौं :मन्त्री महासेठ
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सिन्डिकेट, भ्रष्टाचार र कालाबजारीको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
कानुन बनाउँदै स्थानीय तह
प्रदेश सरकारहरूले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमअनुसार स्थानीय तहले कानुन बनाउन थालेका छन् । प्रदेश सभाका सांसदहरू र स्थानीय तहका प्रमुखहरूले संघीय सरकारबाट गर्नुपर्ने कामको बाँडफाँट स्पष्ट नभएको गुनासो गर्दै उनीहरूको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विषयमा केन्द्रित रही प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुरूप कानुन बनाउन थालेका हुन् ।
विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणपछि वर्तमान राजनीतिक समीकरण हेरफेर हुन सक्ने अनुमान गरिरहेका छन् ।
विकासमा काङ्ग्रेसले सरकारलाई सघाउँछ : गगन थापा
नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारले राम्रो काम गरेमा त्यसको प्रशंसा नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने बताएका छन । विगतमा जस्तो सरकारले गरेका सबै कामको विरोध गर्ने नभई अब राष्ट्र निर्माणमा काङ्ग्रेसले पनि हातेमालो गर्ने उनको भनाई छ ।